Tilmaamaha degdegga ah: Maareeyaha Tag Google > Vielhuber David
Tilmaamaha degdegga ah: Maareeyaha Tag Google06
Maamulaha Google Tag Manager wuxuu isu aasaasay inuu yahay heerka rasmiga ah ee loogu talagalay isdhexgalka qoraallada raadraaca. Sidan oo kale, hal dhinac, mas'uuliyadaha (suuqgeynta internetka iyo barnaamijyada) si habsami leh ayaa loo kala soocay oo dhinaca kale, waxaad si dhakhso leh u dejin kartaa oo aad wax uga beddeli kartaa raadinta adoo adeegsanaya kanaal fidin dheeraad ah. Halkan waxaa ah laba talo oo yar oo ku saabsan dejinta waxyaabaha kiciya.
Markaad abuureyso waxyaabaha kiciya, mid ayaa badanaa doorta ikhtiyaarka "Isku aado xulista CSS" oo ah nooca kiciyaha Tusaale ahaan, haddii aad gasho qiimaha .foo .bar .button , badanaa waxay dhacdaa in kiciyaha uusan kicin kalsoonaan. Sababta tani waxay badanaa tahay in waxyaabo dheeri ah oo HTML ah (tusaale ahaan <span> xubno loogu talagalay qaabeyn dheeri ah) lagu dhex qarin karo qaybta badhanka. Haddii aad markaa si toos ah u gujiso cunugyadan canugga ah, kiciyaha ma shidmayo - dhacdadan laguma faafin heerarka DOM (lama buunbuunin). Si tan looga fogaado, ku celi xulista oo ku dar xulista guud "*". Tusaalaheena, muujinta dhan waa .foo .bar .button, .foo .bar .button * .
Talo labaad, waxaa jiray dhaqan qas ku ah biraawsarka Safari illaa iyo iOS 10.2 (illaa nooca hadda): Haddii aad raad raacdo mailto: xiriiriyeyaasha, farriinta soo socota waxay u muuqaneysaa duruufo gaar ah ka dib markii la taabto xiriirka:
Halkan nooca kicinta " Guji - Xidhiidhada kaliya " ayaa lagu shaqeeyay ikhtiyaarka " Sug tags ". Tani waxay dib u dhigeysaa firfircoonida bartilmaameedka xiriiriyaha dhabta ah, taas oo horseedaysa farriinta aan soo sheegnay. Ka dib markii aad curyaamisay xulashada, dhibaatadu mar dambe ma dhacdo. Haddii kale, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa nooca kicinta " Guji - Dhammaan canaasiirta " oo waxaad u isticmaali kartaa xulashada CSS si aad u sheegto bartilmaameedka sida ugu macquulsan ee isku xirka ah.
Dib u laabo
xir2 warbaahinta cusub GmbH
Fakis +49 89 21 544 59 1
Xaqiijinta calaamadeynta W3C